Cabsi xoog leh oo ka jirta xaafada islii Nairobi iyo Ciidamo lagu soo daadinayo saacadaha soo socda. | Dayniile.com
Home Warkii Cabsi xoog leh oo ka jirta xaafada islii Nairobi iyo Ciidamo lagu...
Cabsi xoog leh oo ka jirta xaafada islii Nairobi iyo Ciidamo lagu soo daadinayo saacadaha soo socda.
Xili 24 saac ka yar ay ka dhiman tahay Go’aanka maxkamadda ICJ ay ka soo saarayso xukunka dacwadda badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa ka jira magaalada Nairobi Cabsi xoogan.
Magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada islii ayaa waxaa lagu wadaa in Bari lagu soo daadiyo Ciidamada Dalka Kenya, kadib Markii Ganacsatada ay arintaas goor dhawayd ooo Cawa ah ay shaaciyeen.
Sidoo kale Ganacsatada ayaa ku baaqday in aan la samaynin banaanbaxyo loogu dabaal Dagayo Guusha ICJ ay bari ku dhawaaqi doonto.
Sidoo kale Ganacsatada ayaa dadka reer Kenya ka codsaday inay aysan berri dhigin wax banaanbax ama dabaal deg ah, cid kasta oo ay guushu raacdo, si looga badbaado isku dhacyo rabshado wata oo ka dilaaca dalka.
Previous articleDowladda Ciraaq oo gacanta ku dhigtay in horay Madaxiisa lacag loo dul dhigay
Next articleDaawo: Khadiija Diiriye oo la noqotay lacag 15,000 Shan iyo toban kun oo dollar oo ay u diri laheyd Barkhad Jaamac Batuun